PressReader - Eyethu Baywatch: 2018-12-05 - I-NRB id­lulele pham­bili kwi-Ned­bank Cup
I-NRB id­lulele pham­bili kwi-Ned­bank Cup
Eyethu Baywatch - 2018-12-05 - SPORT • EZEMIDLALO - Wise­man Mthiyane
NAPHEZU komd­lalo obunge­muhle kan­gako we-Richards Bay FC, nokho leliqembu lik­wazile ukud­lulela pham­bili es­i­ga­beni samaqembu angu-16 as­esele kwindebe ye-Ned­bank Cup.
Lokhu kwen­zeke emd­lal­weni obungeSa­batha eMh­lathuze Sta­dium, nge­sikhathi i-NRB iguqisa iRoyal Ea­gles ngo-1-0.
Um­phumela walomd­lalo ucaciswe esi­wombeni sokuqala sesikhathi es­en­geziwe, nge­muva kokuba la­maqembu ebam­bane nge­qanda ngapha nan­gapha esikhathini sem­izuzu engu-90.
Imizuzu engu-90, akukhona nje ukuthi ay­ibanga na­m­agoli, kodwa ibiduma, umd­lalo wala­maqembu ubun­gahlangene, ebed­lala ib­hola eliy­inhlakanhlaka nje.
Woma­bili la­maqembu ehlulek­ile uku­valela am­agoli, njen­goba am­ab­hola abe­wakhahlela awak­wazanga ukup­haz­a­misa onoz­inti, amanye ebe­phuma ece­leni kwama­pali. Lokhu kwenze kwaqala ukubonakala ukukhathala kubad­lali abaningi.
Kodwa ke izin­guquko ezikhaliphile ezen­ziwe ngumqe­qeshi we-NRB, uBran­don Truter, zenze leliqembu laqala uk­wenyusa ama­sok­isi, lad­lala ib­hola elih­langene.
Lokhu kwen­zeke nge­muva kokun­gena kom­gadli os­e­n­e­sip­iliy­oni uThabiso Nkoana, ofike waqin­isa amafolosi aleliqembu.
Bakhande am­ath­uba amaningi okushaya igoli, ikakhu­lukazi bekub­hoke uMpho Eras­mus, odedele im­bum­bulu yeshodi, es­haye epalini yabuyela en­si­mini, un­oz­inti we-Ea­gles u-Pa­trick Nyame es­en­gasekho ema­palini. UNkoana no-Muis­hond bap­haz­a­misene em­izamweni yabo yoku­valela igoli ebelilula, kodwa nalokho akup­haz­a­misanga lutho, ngoba, emva kwalowom­zuzu nje kuqhamuke uSiyanda Ngubo, wa­jika abad­lali base­muva, wase ezama ukuli­valela phakathi, en­gakalithinti uNyame. Bashay­isane nga­makhanda, kodwa ib­hola lag­in­qikela kuNgubo ovele wali­valela enethini, waphen­duka iqhawe leqembu lasekhaya.
Isi­wombe sesi­bili sesikhathi es­en­geziwe be­sishu­bile, amaqembu woma­bili ehlase­lana, nok­wenze un­oz­inti we-NRB uXolani Ng­cobo enze ad­ume ngazo, uku­vimba ngisho im­pukane, en­ga­funi lutho olu­son­dela ema­palini akhe. Yize lik­wazile ukud­lulela pham­bili emzuliswa­neni we-Last 16, kodwa leliqembu alid­lalanga ib­hola el­ug­culisayo, nelaziwa ngalo.
Larry Bent­ley Dave Sa­vides
Katleho Maphathe we-NRB ebanga ib­hola emoyeni noSim­phiwe Tsha­bal­ala we-Ea­gles Umshayi we­goli uSiyanda Ngubo equkulwa ngabad­lali be­qembu lakhe nge­muva koku­valela igoli elin­qo­bise eza­khe
Iz­in­tokazi ze-NRB ebez­i­nan­disa nge­sikhathi sekhefu
UMpho Eras­mus ekhahlela ib­hola, ex­inwe kabi ngu-Sa­muel Man­ganyi weEa­gles onge­muva